Ny sandan'ny mpampitohy mifanohitra amin'ny Influencer | Martech Zone
Manohy mitolona ao anatin'ny indostrian'ny influencer miaraka amin'ny mari-pahaizana tsy mitombina sy isa marobe isika. Izaho dia nitsikera ny indostria hatramin'ny nanombohany tamin'ny media sosialy fa tsy refesina akory ny ankamaroan'ny metrika sy ny sehatra hery miasa mangina, mandrefy ny haben'ny tambajotra, mpihaino na vondrom-piarahamonina fotsiny izy ireo.
Izaho manokana dia manana tambajotra tena lehibe… hany ka matetika io dia tsy voafehy ary manana fotoana sarotra aho hikolokoloana fifandraisana tsara amin'ny olona maro izay hajaiko. Rehefa mandeha ny fotoana, ny olona sy ny orinasa dia mirona any amin'ny sy tsy misy fifantohana rehefa mitodika any amin'ny orinasa efa akaiky isika. Indraindray isika dia mifandray indray amin'ny tanjona rehefa mitady azy ireo ho loharanom-pahalalana azo antoka amin'ny lohahevitra tsy ananako fahaizana manokana aho. Amin'ny fotoana hafa, mety ho eo amin'ny fihaonambe na hetsika fotsiny aho ary sendra eo izy ireo ary handrehitra ny fifandraisanay indray izahay.
Ao anatin'ny tamba-jotra misy ahy indraindray hery miasa mangina mividy fanapahan-kevitra ho an'ny olona sasany izay mifandray amiko na manaraka ahy… fa io isa io dia ambany dia ambany. Manana mpanjifa vitsivitsy izay matoky ahy tanteraka aho ary mety handray fanapahan-kevitra ho azy ireo mihitsy aza aho. Manana olon-kafa ao amin'ny tambajotranoko aho izay nanolo-tena ary nilaza fa nanampy tamin'ny firosoana amin'ny sehatra sy paikady aho nefa tsy mandray anjara manokana. Ary avy eo, mbola manana lurkers vitsivitsy izay notanako aho nefa tsy nizara izany ampahibemaso ary tsy fantatro ny fitaomana rehetra. Reko matetika ny vahaolana nosoratako momba izay nisaotra ahy ary nilaza fa nanjary fananganana fahatsiarovan-tena na mpanjifa tsara mihitsy aza izany. Raha tsy nilaza tamiko izy ireo dia tena tsy ho fantatro izany.
Matetika kokoa noho ny fitaomana fanapahan-kevitra momba ny fividianana, I mifandray olona ao amin'ny tambajotranoko miaraka amin'ny olon'i hery miasa mangina. Omaly, ohatra, nihaona tamin'ny sehatra iray izay ampifandraisiko amina influencer ao amin'ny indostrian'ny dokambarotra media sosialy. Matoky ahy ny influencer ary matoky ny lampihazo aho, noho izany dia fifandraisana lehibe azo atao. Azoko antoka fa hiteraka fanentanana sy fidiram-bola fanampiny izany.
Ka, influencer na mpampifandray ve aho? Nandritra ny fitaomako sasany fividianana fanapahan-kevitra, mino aho fa mihoatra ny a connector. Fantatro ireo sehatra, fantatro ny vahoaka, azoko ny fizotrany… ka afaka mampifandray ireo vinavina tsara amin'ireo olona mety aho hanampy azy ireo handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana.
Ny olana amin'izany, mazava ho azy, dia ny tsy fisian'ny fiampangana azo tsapain-tanana ho an'ity amin'ny tahiry fifandraisana na avy amin'ny sehatra influencer. Fantatro fa manan-danja ny sandako - fifandraisana iray nataoko no nahatonga ny fahazoana orinasa iray mivantana. Izaho koa dia nandray anjara tamin'ny famatsiam-bola maherin'ny arivo tapitrisa dolara amin'ny indostrian'ny Martech. Izaho koa dia nanampy mpanjifa am-polony tamin'ny safidin'ny mpivarotra… izay nisy fiantraikany tamin'ny vola an-jatony tapitrisa amin'ny fidiram-bola mivantana.
Tsy milaza izany aho mba hireharehana… Matetika aho dia olona am-polony amin'ireo ekipa ireo no manampy amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana. Ary efa am-polotaona maro no nanaovako an'io ka nandehandeha imbetsaka aho ary fantatro izay ataoko. Mpifandray tsara aho.
Mpifandray mifanohitra amin'ny Influencers
Avelao aho hiresaka. Misafotofoto tanteraka ny fitaomana amin'ny fifandraisana izahay ary mampiakatra fanamby roa tsy mitovy:
Mpifandray indraindray tena mpampifandray - misy orinasa mitady olona toa ahy miaraka amina fanarahana lehibe amin'ny indostria na faritra iray. Indraindray dia misy fiantraikany io, indraindray kosa dia hita fa misy fiantraikany kely (raha kely kokoa ny isa ary akana ny lohahevitra). Saingy angamba tsy mitaona ny fanapaha-kevitry ny fividianana… mpampifandray mampino fotsiny izy ireo. Diso fanantenana matetika ireo orinasa ireo amin'ireto fampiasam-bola ireto… satria mety tsy hitondra ny valin'ny fidiram-bola mivantana nandrasana izy ireo.
Ny mpampitohy dia manana lanja tsy mampino ihany koa - misy olona manana tamba-jotra marobe an-tserasera izay loharanom-pahalalana mahafinaritra manampy amin'ny fampifandraisana ireo teboka - manomboka amin'ny mpampiasa vola, amin'ny sehatra, amin'ny mpanjifa - saingy tsy misy fomba kely ahafahana manome lanja ireo fifandraisana ireo. Raha, ohatra, nampahafantatra ny orinasanao tamina influencer iray aho ary nampiasa vola tamin'io fifandraisana io… izay mety hitarika amin'ny fitomboana mahomby… ary ny karama rehetra dia (ara-drariny) omena an'io influencer io. Na izany aza, raha tsy nisy ny fifandraisana dia tsy ho nisy izany.
Amin'ny maha olona manala ny orinasako amin'ny fahalalàn'ny orinasako ary nanao fampanjariam-bola lehibe tamin'ny tambajotranoko, dia miady amin'ny fividianana tanteraka an'io heriko io aho. Ahoana ny fomba hanangonanao vola amin'ny maha-a connector? Ny sasany amin'ireo mpanjifako dia manaiky ny sanda aorian'ny nifanaovanay efa ela ary tsapan'izy ireo ny valiny ambany.
Sehatra maro hafa no manatona ahy mitady valiny eo noho eo. Napetrako ny fanantenana farany azoko natao fa ny fivarotana ny vokatra na ny serivisy dia tsy ny harena sarobidy indrindra entiko… ary matetika izy ireo no miala amin'ny fanombohana fifamatorana amiko. Raha mahita ny mety ho izy dia mahadiso fanantenana… saingy azoko ny tsindry misy azy ireo sy ny fahasarotana amin'ny fanomezana lanja ny fifandraisana.
Rehefa hitanao izany isa lehibe, mety halaim-panahy hanakarama ilay olona miaraka amin'ireo isa ireo ianao amin'ny maha an hery miasa mangina. Ataovy ao an-tsaina fotsiny fa ny sanda entin'ireo isa marobe ireo dia mety tsy voafetra amin'ny fivarotana ny vokatrao na ny serivisinao… mety ireo fifandraisana ampitondrainy anao ireo.
Tags: connectorsFiverenana amin'ny fitaomanafifaneraserana